Haweenka iyo caruurta Jowhar oo dalbanaya in ay MSF sii wado howleheedii gobolka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 19, 2013 5:59 b 0
Jowhar, August 19, 2013? – Degmada Jowhar ee xaruunta gobolka shabeelaha dhexe waxaa maanta ka dhacay mudaharaad balaaran, kaas? oo looga soo horjeedo ka bixistii hay?ada MSF ee dalka Soomaaliya.
Boqolaal qof oo ka tirsan bulshada Jowhar ayaa wareegayey xaafadaha magaalada, waxayna dalbadeen in hay?adu ay ka laabato go?aankii ay ku joojisay adeegyadii dhanka caafimaadka ee ay ka haysay dalka.
Debed-baxayaasha oo u badnaa caruur iyo haween waxay ku cel-celiyeen in ay MSF ka laabato go?aankii ay ku joojisay gargaarka ? MSF howsheedu muhiim ayey u ahayd shaqooyinka caafimaadka ee Jowhar? ayey lahaayeen dadka jowhar ee arintaan ka banaan-baxay.
Odoyaasha dhaqanka ee degmada Jowhar waxay sheegeen in ay ka xun yihiin in ay talaabada ay qaaday MSF, taasi oo dareen gelisay dumarka iyo caruuta oo maanta muujiyey saameynta ay ku yeelatay adeegyadii hay?ada oo la waayey.
Maryam sheikh Cabdi oo ka mid ah ururada haweenka jowhar waxay sheegtay? waxaa muhiim ahaa oo ay hay?adu qaban jirtay howlaha hooyada iyo dhalaanka, waxay ka shaqaynaysay guud ahaan degmooyinka gobolka, haweenka ayaa lacag la?aan lagu umulin jiray, sidoo kale caruurta ayaa la nafaqeyn jiray, iyo howlaha cudurrada guud?.
Bulshada Jowhar ee maanta mudaharaaday una badan caruurta iyo haweenka, ?waxay dalbadeen in hay?adu ay howsheeda sii wado, gaar ahaan Jowhar xataa hadii aysan shaqaalaha ajinebiga ah imaan karin, waxay codsadeen in shaqaalaha soomaalida ay howlaha sii dar-dar geliyaan.
Maxamuud Cabdi oo Daljir ka tirsan ayaa waraystay Maryman Sheikh Cabdi oo Jowhar joogta